10 shay oo Donald Trump uu aaminsan yahay - BBC News Somali
10 shay oo Donald Trump uu aaminsan yahay
Musharraxa jamhuuriga ee madaxtinimada Maraykanka Donald Trump hoggaanka uu u qabtay is-reebreebka gobolka New Hampshire waa markii ugu horreysay ee ganacsadahan reer New York, oo aan weligiis xafiis loo dooran, uu ka turjumo taageerada ballaaran ee ra'yiga dadweynaha oo codbixinta uu ku guulaysto. Laakiin maxay yihiin siyaasadihiisu?
1. Waxaa jiri doonta in isha lagu hayo masaajidda Maraykanka ku yaal. Trump waxaa uu rumaysan yahay in hay'adaha ammaanku ay dabalaan muslimiinta si looga hortago argagixisanimada, waxna kama gelin haddii indha ku haynta masaajidda loo arko inay siyaasad ahaan khaldan tahay.
2. Maraykanku waa inuu adeegsado dadka biyaha lagu rido iyo habab kale oo si adag su'aalo loogu weydiinayo dadka taas oo ka mid ah dagaalka ka dhanka ah kooxda sheegata dowladda Islaamiga. Musharraxu waxaa uu sheegay in hababkani ay yihiin wax aad u yar marka la barbardhigo xeeladaha ay adeegsadaan dagaallamayaashu, sida dadka ay qoorta ka jaraan.
4. Waxaa uu doonayaa inuu gidaar aad iyo aad u weyn ka dhiso inta u dhexaysa Maraykanka iyo Mexico si uu u celiyo dadka sharci darrada ku soo gelaya iyo sidoo kale soo galootiga reer Suuriya. Mr Trump waxaa uu soo jeediyay in dadka reer Mexico ee Maraykanka imanaya ay badankoodu yihiin dembiileyaal. "Waxay keenayaan mukhaadaraad, waxayna keenayaan dembi, waana kuwa dumarka kufsada," ayuu yiri. Waxaa uu rumaysan yahay in Mexico ay bixiso lacagta gidaarka lagu dhisayo, taas oo qiimeyn ay BBC-du sameysay gaaraysa inta u dhexaysa 2.2 bilyan oo dollar ilaa 13 bilyan oo dollar.
7. China waa inay shaqo badan ka qabato arrimo dhowr ah si ay Maraykanka ganacsi isu-dheellitiran ula yeelato. Haddii la doorto waxaa uu sheegay inuu China ka dhigi doono mid joojisa qiime dhaca ay ku sameyso lacagteeda, uuna ku khasbi doono inay sare u qaaddo heerarka ay ka joogto dhinacyada bey'adda iyo shaqada.
8. Isbeddelka cimiladu waa "hawada uun". Iyadoo Trump uu rumaysan yahay inay muhiim tahay helitaanka hawo nadiif ah iyo biyo nadiif ah, haddana waxaa uu diiddan yahay sayniska isbeddelka cimilada oo uu ku sheegay wax been ah, waxaana uu rumaysan yahay in xayiraadaha bey'adda ee xagga ganacsiga la saarayo ay Maraykanka ka dhigayso mid aan aad ugu tartami karin suuqyada caalamka.
10. Runtii waa nin wanaagsan. Buuggii ugu dambeeyay Trump, oo la yiraa Cippled America, waxaa uu qoray inaan ahay runtii nin wanaagsan, i rumayso, waan iskula weynahay inaan ahay nin wanaagsan, laakiin waxaan kaloo jeclahay igana go'an inaan waddankeenna mar kale ka dhigo mid aad u wanaagsan.